Nagu Saabsan | Fursad
elisyumbitcoin mining worth itShaqo-la’aantu waxy ka mid that caqabadaha ugh waaweyn ee Soomaaliya ka jira manta. Tiro yar oo ka mid ah ardeyda ka qalinjebisa jaamacadaha ayaa shaqo hela. Si gaar ah gabdhuhu waxay la kulmaan caqabado badan oo ka haysta habkii ay shaqooyin sharaf leh ku heli lahaayeen.
Iftin Foundation, oo kaashaneysa Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed, ayaa waxay ka shaqeyneysaa barnaamij loogu magac daray FURSAD, oo loogu talogalay in gabdhaha jaamacadaha ka baxay ay shaqooyin ka helaan shirkadaha, dowladda, hay’adaha Soomaaliya ka howlgala.
Waxen dooneynaa inaan fern dodo ku saabsan side arrintan cal qaran logo heli lahaa, talkaas oo ay ka dada qeybqaadanayaan hammaan dhinacyada ay arrintaan khuseyso sida shirkadaha, jaamacadaha, dowladda, bulshada rayidka, waalidka iyo gabdhaha qalinjebiyay qudhooda.
Mashruucan wuxuu leeyahay ujeeddooyin loogu talogalay inuu gaaro. Waxaa la dajiyay qorshayaal lagu xaqiijinayo in la gaaro ujeeddooyinka. Qodobada soo socda ayaa ugu waaweyn ujeeddooyinka mashruuca:
In dareenka shacabka lagu soo duwo caqabaddaha ay gabdhaha jaamacaddaha ka qallin jabiyey kala kulmaan inay shaqo helaan
In lagu dhiirro-galiyo dhinacyada wax shaqaaleysiiya sida shirkadaha, dowladda, NGO-yada, bahda waxbarshada sidii ay shaqaaleysiin lahaayeen gabdho badan oo soo qalinjebiyay.
In lala taliyo gabdhaha ku cusub shaqada si looga caawiyo inay la qabsadaan shaqadooda.
In wax laga qabto arrimaha khuseeya shakhsiyadda, dhaqanka, shirkadaha iyo hay’adaha, ee saameynta ku leh shaqaaleysiinta gabdhaha.
In gabdhaha loo abuuro madal ay ku wada xiriiri karaan, ku doodi karaan, isla markaana u doodi karta xuquuqdooda shaqada iyo waxbarashada.
In gabdhaha lagu dhiirrigeliyo inay waxbartaan, waayo haddii ay gabdho badan shaqo helaan, gabdho badan ayaa waxbaranaya.